गोजीमा थपिँदै अर्को एउटा महत्वपूर्ण कार्ड | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
भदौ १०, २०७६ मंगलबार २०:४७:८ | नवराज फुयाँल
काठमाण्डौ - तपाईँको गोजीमा अहिले कतिवटा परिचय पत्र छ ? नागरिकता परिचयपत्र, मतदाता परिचय पत्र त उमेर पुगेका हर कोहीसँग पक्कै होला । त्यसका अलावा राहदानी परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र, स्थायी लेखा नम्बर परिचय पत्रलगायतका परिचय पत्र पनि धेरैको गोजीमा छ ।
अब तपाईँले फेरि अर्को पनि परिचय पत्र गोजीमा राख्नुपर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक पारित गरेसँगै तपाईँको गोजीमा छिट्टै अर्को एउटा परिचयपत्र राख्नुपर्ने भएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले अहिले पनि पाँच छ वटा परिचयपत्र नेपालीहरुको खल्तीमा रहेको र राष्ट्रिय परिचय पत्र थप भएपछि त्यो राख्न अझै कतिवटा खल्ती बनाउनुपर्ने हो? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । एउटै परिचयपत्रमार्फत सबै काम हुनेगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनु पर्नेमा त्यसरी आउन नसकेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
सांसद सुवालको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राष्ट्रिय परिचयपत्रले अन्य परिचय पत्रहरुलाई बिस्तारै विस्थापित गर्दै लैजाने बताउनुभयो ।
नागरिकता र राहदानीलाई यसले अहिले नै विस्थापित गरिहाल्ने अवस्था नरहेको भन्दै उहाँले अन्य परिचयपत्रहरुलाई भने विस्थापित गर्ने लक्ष्यसहित नै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
यस्तै बैठकमा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गर्ने जानकारीको एकीकृत सुचना संकलनको काम नहुँदै परिचयपत्र वितरणको काम सुरु गरिएको भन्दै सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गर्नुभयो । विधेयक नै नआउँदै कार्ड छाप्ने र १५ वटा जिल्लामा परिचयपत्र वितरणको काम सरकारले हतारमा गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
अर्का सांसद अतहर कमाल मुसलमानले विधेयक नआउँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्नु संसदकै अवहेलना भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र छपाइका लागि काम समेत भइसकेको र कतिपय ठाउँमा वितरण समेत भइसकेको छ । कमिसन फिर्ता दिनुपर्ने र फिर्ता लिनुपर्ने भएर विधेयक पारित गर्न सरकार बाध्य भएको भन्ने कुरा बाहिर आएको भन्दै सांसद सुवालले खास कुरो के हो? भनेर प्रश्न तेर्स्याउनुभयाे ।
सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम एक दशक अघिबाटै सुरु भएकाले यसमा कमिसन र भ्रष्टाचारको प्रसंग कतै नजोडिएको बताउनुभयो ।
सांसद सरिता गिरीले नागरिकताबाट बञ्चित भएका नागरिक राष्ट्रिय परिचय पत्रबाट पनि वन्चित हुने भएकाले यसले आफ्नै देशका नागरिकलाई विभेद गरेको बताउनुभयो ।
पहिला नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ल्याइसकेपछि मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको काम गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसो नगरी फेरि पनि नागरिक–नागरिककाबीच विभेद खडा गराएको बताउनुभयो ।
तर गृहमन्त्री थापाले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि संसदको समितिमा अड्किएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम अघि बढेको स्पष्टीकरण दिनुभयो ।
‘विधेयक बनाएर परिचयपत्र वितरण गर्दा पनि हुने हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर विधेयक समितिमा अड्किएकाले समस्या भएको हो ।’
नागरिकता पाएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउने भनेर विधेयकमा उल्लेख छ । तर नागरिकता वितरण नै खुकुलो छ, देशको सीमा खुल्ला छ भने त्यही नागरिकता अनुसार बाँडिने राष्ट्रिय परिचय पत्रले देशको सुरक्षा व्यवस्था कसरी सुदृढ हुन्छ? भन्दै सांसदहरुले प्रश्न उठाए ।
सांसद प्रेम सुवालले विदेशीले पाएको नेपाली नागरिकता छानबिन गरेर खारेज नगरेसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण शुद्ध हुनै नसक्ने बताउनुभयो । ‘मानार्थ, वंशज, अंगीकृत के–के हो के–के किसिम किसिमको नागरिकता छ हाम्रो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर राष्ट्रिय परिचयपत्रमा भने त्यस्तो छुट्टाछुट्टै व्यवस्था छैन, यसले नागरिकता जस्तो किसिमको पाएको भए पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रले सबैलाई एउटै बनाइदिएको छ ।’
प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो ।
विधेयकले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको मुख्य आधार मानेको छ । यस्तै विदेशी र गैरआवासीय नेपालीलाई छुट्टै परिचयपत्र दिइने व्यवस्था छ ।
यस्तै परिचय पत्र तथा व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्रको नक्कल वा किर्ते गर्नेलाई पनि सजायको व्यवस्था छ । यस्तो कसूर गर्नेलाई प्रचलित कानुन बमोजिम जालसाजी वा किर्ते गरे वापत हुने सजायमा थप पच्चीस प्रतिशत सजाय हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएसँगै अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ । राष्ट्रिय सभाले पनि यही विधेयक हुबहु पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ जाने र त्यहाँबाट प्रमाणीकरण भएपछि यो ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउने छ ।
Arjun pd Paudel
नागरिकताको रंग फरक फरक बनाउनु पर्यो / बंसजको लागि रातो, जन्मसिद्धको सेतो अनि अंग्रीकृतको लागि पहेंलो बनाउनुपर्छ /